Bogga ugu weyn / Tilmaamaha qasabada / Qasabadaha jikada dib loo eegay - Qasabadaha Jikada ee ugu Fiican Dhamaan Naqshadaha iyo Baahiyaha
2020 / 11 / 08 QoondayntaTilmaamaha qasabada 8425 0
Markaad rajeyneysid inaad dhameysid jikada, shaqsiyaad badan ayaa dareemaya in booskaan uu yahay xoogaa meel lagu kulmo, iyo goob ay kuwada xiriiraan qoyska oo dhan. Qoysasku waxay isugu yimaadaan quraacda subaxdii waxayna kawada hadlaan maalinta soo socota iyo maalinta soo socota, ama waxaa laga yaabaa in laba saaxiibbo ah ay si fudud u fadhiyaan, iyaga oo lacag ka qaadanaya hal galaas oo khamri ah oo ay ku jiraan cuntooyinkooda fudud. Tani waa sababta mawduuca qaab-dhismeedka jikada uu ugu welwelsan yahay xagga hagaajinta guriga. Waqtiga aad diyaarinaysid qorshe jikada qaaliga ah, oo aad ka faa'iideysaneyso qaabka ugu macquulsan uguna qurxan qaabka guud, hal dariiqo oo aan caadi aheyn oo aad ku qaadan karto dhibco ayaa ah inaad soo bandhigto qalabka saxda ah. Marka laga yimaado fursadda ah in dulucda qaabdhismeedka oo dhami ay weyn tahay, haddana qalabku waa caajis iyo hurdo la'aan, xilligaas waxaad u baahan doontaa inaad sii waddo dib-u-naqshadaynta, ama aad u hesho shakhsiyaad beddelaya oo wax ka qabanaya rakibiddaas.
Habka ugu fiican ee looga gudbi karo taas waa in la helo rakibo hufan xaalad kasta. Tuubbooyinka jikada waa isku mid, maxaa yeelay waxay ku jiraan toogasho dheer mid ka mid ah qalabka ugu muhiimsan ee aad ku soo bandhigi doonto jikadaada. Iyadoo aan loo eegin haddii aad mashiinnadaada soo bandhigtay oo aad diyaarsatay, iyo wax kasta oo kale oo jikada ku jira waxay u muuqdaan kuwo la yaab leh, iyo haddii ay jirto fursad aad ku haysato saxanka saxanka ee saxda ah, xitaa hadda waxaa jiri doona kormeer muuqda. Waxaad ubaahantahay nooca qasabada oo aan kaliya qeexitaanka usheegi doonin qolka wali si lamid ah ayaa kusii socon doonta xoogaa, sida bixinta waxtarka adag sidaa darteed uma baahnid inaad kusii wado iibsashada qalabyo kaladuwan mudo. Ku dhigida ilaha kayd biyo ah oo tayo leh jikadaada ayaa kaa caawin doonta inaad meel dhigato lacag kaash ah muddada dheer. Iyadoo taasi jirto, qasabadaha jikada ee tayo sare leh oo keli ah ayaa sii socon doona xoogaa, oo waxay u muuqan doonaan sifiican, iyadoo aan lahayn wax macdan ah oo horumaraya iyo nabaad guur.
Malaha sahaminta qasabada ugu fiican waxay ka imaanayaan madaxda ugu sareysa arimahan. Tani waxay kujirtaa qasabadaha jikada Grohe, qasabada Delta jikada, Price Pfister jikada, Hansgrohe, qasabadaha jikada Danze, qasabadaha jikada Kohler, qasabadaha Pegasus, American Standard, matte madow oo hoos u dhigaya qasabada jikada, iyo Glacier Bay jikada. Tuubbooyinka jikada ee loo yaqaan 'Scaffold tubo' ayaa sidoo kale laga heli karaa qayb ka mid ah magacyadan waana iyagu qaabkii ugu casrisanaa ee ku jira mawduuca naqshadaha jikada. Labada noocba waxay ikhtiyaar u leeyihiin inay ku siiyaan qalab tayo leh oo aan ku sii nagaan doonin jikadaada, hase yeeshe waxay ku siin doontaa qorshooyinka ugu taajirsan uguna macquulsan iyo habsami u shaqaynta.
Qasabadaha American Standard waxaa caan ku ah qasabadaha macdanta `` lead '' iyo tallaabooyinka joogtada ah ee ADA. Waxay leeyihiin baaxad ay ka mid yihiin waxyaabo ay ka mid yihiin qasacad goos goos ah iyo qasabad hal xakame oo la isku halleyn karo oo leh qubeys laga soo jiido. Kharashyadu waxay ka imaanayaan hoose illaa heer aad u sarreeya oo ku tiirsan qaabka iyo tayada. Delta qasabadaha waxaa loogu dabaaldegaa qorshayaashooda rafcaanka ah iyo noocooda Tiir taabashada. In kasta oo xaqiiqda ay tahay in kharashyadu ay ku jiraan heerarka sare waxay bixiyaan tuubbo adag oo siman. Tuubbooyinka jikada ee 'Grohe jikada' waa jilicsan yihiin waxayna la socdaan dammaanad-qaad noloshooda oo ah shaqo-qabad iyadoo weliba ay ku jiraan qaab-dhismeedka SpeedClean ee looga soo horjeedo dhammaystirka liinta. Kohler qasabadaha ayaa hormuud ka ah waxayna siiyaan rakibaadda jikada ee waxtarka leh heerar cadaalad ah. Tuubbooyinka jikada ee Pegasus waxay bixiyaan shaqo farshaxanimo iyo noocyo kala duwan oo qasabado ah kuwaas oo sidoo kale ku daraya noocyadooda tubbada Bridge Bridge loo yaqaan Deco Bridge. Qiimaha Pfister qasabadaha jikada waxay siiyaan qaabdhismeedka ergonomic iyo shuqullada qulqulka ee tubbadahooda. Qayb ka mid ah qorshayaasha xitaa waxay la socdaan dammaanad-qaadasho waqtiga jiritaanka oo caddeysa sida ay u adag tahay.
Hantidhawrka alaabtan ayaa si qoto dheer ufiican oo alaabooyinkan ayaa lagu kalsoonaan karaa inay ku siiyaan, iibsadaha, waqtiga jiritaanka dhabta ah ee caawimaad tayo wanaagsan leh iyo shaqada ugu fudud.
Hore:: Tilmaame ku saabsan Sida loo doorto Tuubbooyinka Jikada ugu Fiican Next: Sida Loo Xullo qasabadaha Jikada
2021 / 02 / 04 12502
2021 / 02 / 03 12214
2021 / 02 / 03 8401
2021 / 01 / 28 7884
2021 / 01 / 28 9903